n iPhone 6s / iPhone 7 / macruufka 9
Taageerayaasha macruufka ayaa dooneysa inay hesho gacmahooda ku update firmware ka badan la sugayay danbeeyay ee Apple, mid ka mid ah shirkadaha Socrates mobile dunida, haa, waxaan ka hadleynaa waa weyn update ee macruufka 9 . Iyo, in dhadhansiinno Dadka Niemo macruufka cusub ay, Apple sida mar walba hubiyaa bixinta version beta ah u download ay ku dhiirigelinayaan keentay oo dhan ku baahsan adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, markii 1aad ee taariikhda shirkadda, waxay go'aansadeen in aan bilowno version dadweynaha beta ee macruufka 9 iyo sidoo kale. Sidaas, cid aniga iyo adiga oo kale ah ayaa sidoo kale kala soo bixi kartaa macruufka 9 beta version ku saabsan qalabka ay macruufka iyo aad u hesho dhadhansiinno Dadka waxa macruufka 9 waxa uu noqon doonaa sida.
Waxaan ka heli kartaa in la ogaado waaqiciga waxa uu yahay oo dhan ku saabsan. Dabcan, shirkadda ayaa indhaha ku helo cayayaan badan oo ka version beta tan iyo macruufka final in la mararka bilaabi doonaa goor dambe oo sanadkan ka mid ah in ay raadiyaan noqon doonaa. Sidaas oo ay tahayna, macruufka badan oo dadka isticmaala horay u soo bixi beta macruufka ah ee qalabka iyo ay bilaabeen in ay helaan arrimaha, dhibaato ama khaladaad.
Haddii aad ka fekereyso inaad isku dayaya baxay macruufka 9 waxayna is-waa in aad keeno Stamford Bridge ka qaadan ama aan, halkaannu wada joognaa oo dhan arrimaha la aqoonsaday oo ay la socdaan xal ay u badan tahay iyo sidoo kale haddii aad doorato in aad, ka hor waxaad tagi kartaa iyo tijaabiso macruufka 9 oo aan dhidid ka soo baxay.
Dhibaatada 1: screen HORTAGA bannaan ee macruufka 9
macruufka 9 yimaado la daah hortag in fadhiya dhinaca bidix ee shaashada guriga. Waa feature weyn isticmaala si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ogaadey inay madhan markii socodo baxay.
Sida loo xaliyo arrintan
Tag Settings> General> Barta bartamaha Search> noqon 'Off' ka dibna la bilaabi qalab macruufka. Marka qalab macruufka ah ayaa dib u billaabay, isku day inaad mar kale bedesheen on habkaani iyo waa in lagu xalliyo arrinta screen maran.
Dhibaatada 2: Ma awoodo in uu iska beddelaan WiFi inay gacanta xiriir
Ma bedesheen ka WiFi in hab gacantu waxa ka mid ah xiriir toos ah waa arin kale oo laga helay by macruufka badan 9 isticmaala. Tani waa irritant ah gaar ahaan marka aad Aynu niraahno, taasoo ka dhigeysa guriga xafiiska ama bilcaksii iyo aad u muuqdaan in ay leeyihiin xiriir gebi ahaanba laga badiyay.
Marka hore, isku day in habka tijaabiyey ee toggling iyo marka Diyaaradeed Mode ah, haddii ay taasi uma shaqeeyo ka dibna isku day in aad ku socday Settings> gacantu> gacantu Data> Jeedsada 'Off' ka hor inta uusan u jeestay 'On' ka dib markii sugayay 3-5 seconds.
Dhibaatada 3: rookaha Volume isagoo aan daynin guji sawirada sida caadiga ah
Mid ka mid ah qaababka aadka u jeclaa oo ka mid ah qalabka macruufka ayaa awooda gujinaya sawirada la isticmaalayo si kastaba ha ahaatee button mugga badan oo dadka isticmaala ku cabanayeen oo arrintan ku saabsan oo aan la macruufka 9. shaqeeya Tani si kastaba ha ahaatee waa arrin loo yaqaan iyo Apple ayaa la shaqeeya.
Waayo, hadda, dhalato kaliya waa update soo socda ka Apple taas oo aannu yeelan doono in la sugo ilaa iyo dhammaadkii sanadkan.
Dhibaatada 4: yaraada nolosha tan iyo batari update
Hadda, wax badan oo macruufka 9 users ay heleen nolol batari dhibta ka dib markii update. Qaar badan ayaa sheegay in batteriga ayaa bilaabay in ay si deg deg ah daadi.
Marka hore, waxaad tagtaa Settings> General> Isticmaalka> Isticmaalka Battery si loo ogaado in arrinta batteriga la keena app gaar ah ama aan. Ka dibna waad tirtiri kartaa iyo dib app ee su'aasha si aad u aragto haddii wuxuu diyaariyaa arrinta. Sida doorasho sare, haddii howleheedii qalab macruufka ah uma shaqeeyo, u tag Settings> General> celi> celi Settings oo dhan oo wuxuu soo geli sirta ah si dib u qalab macruufka ah.
Dhibaatada 5: imaanshada joogta ah network WiFi
Waxa kale oo aanu ka helay dadka isticmaala yar soo food saartay arrimaha la WiFi is ineysan si joogto ah ama aan isku xira garoonka oo dhan mid ka mid ah shabakadaha ah.
Tag Settings> General> celi> celi Settings Network si ay u tirtiri goobaha aad network nadiif ah iyo Tanzania. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa doonayo inuu Settings> WiFi> WiFi Magaca> qasabadda ku illoobin Network this.
Dhibaatada 6: arrimaha Status Bar
Tani waa mid kale oo ka mid ah arrimaha ugu users ayaa lagu soo food leh update macruufka 9 dhexdiina bar xaaladda qaadataa waqti aad u dheer inuu tago marka aad furto app ah.
Tag Settings> General> celi> celi Settings All. Taasi waa hagaajin issue.r ah.
Dhibaatada 7: Constant calaamad Lugood codsiga gujisid
Mid ka mid kale oo ka mid ah arrimaha ugu badan oo dadka isticmaala ayaa ka warbixiyay waa xaqiiqada ah in ay qalab macruufka ah si joogto ah weydiiyo calaamad in si Lugood. Xaaladdan oo arrintan ku hayaa on beerista kor, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho dhalato soo socda.
Tag Settings> Touch ID & habayn> Lugood & App Store> Off. Haddii arrinta mar kale dhacdo, si fudud u raaci talaabo ee kor ku xusan mar kale, markan keliya u celin 'On' halkii. Toggling u dhexeeya 'Off' iyo 'On' waa khiyaarka kaliya ee u haatan.
Dhibaatada 8: Wrong markii la soo bandhigay macruufka 9
Arrinta si kastaba ha ahaatee weli Small irritant ah, dadka isticmaala waxay ogaadeen in uu boostada ugu update macruufka 9, wixii ay soo bandhigeen ayaa joojiyay waqtiga ku haboon si ay meesha.
Tag Settings> General> Date & Time> Calan toos ah> Off.
Dhibaatada 9: qalab macruufka ah ma aanan arkin update macruufka 9
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay heleen in ay qalab macruufka ah ma aanan arkin update macruufka 9 iyo si loo xaliyo arrintan, waxaa laga yaabaa in aad leedahay si ay dib-u-soo dajiyo ee profile on your qalab macruufka ah.
Waxaa laga yaabaa in ay ku soo celiyaan nidaamka of hagaajinta ag maraya in beta.apple.com/profile ka dibna adiga oo riixaya on doorasho Download Profile. Marka download ay ka badan tahay, dooro ikhtiyaarka ah ee Ku rakib. Guuleysatey qalab macruufka hadda oo taga si Settings> General> Software Update oo waa inaad awoodaa inaad ka aragto macruufka 9 download noqon.
> Resource > iPhone > Solutions Full in dayactir All macruufka Your 9 Dhibaatooyinka / Khaladaadka